Ehellusuna oo cafis u fidiyey xubin ku jiray Shabaab oo ku xirnaa xabsiga Dhuusamareeb (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 24, 2013 2:49 b 0
Guriceel, December 24, 2013 – Ururka Ehellusuna waljamaaca ee gobolada dhexe ee dalka ayaa shaaciyey inay sii daayeen xubin ka tirsan Al-shabaab oo horay isu soo dhiibay, kaas oo la marsiin lahaa xukun adag.
Axmed Cabdulaahi Ilkacase oo ku jira gollaha fulinta Ehellusuna ayaa shaaciyey sii daynta xubinta ka tirsan Al-shabaab oo mudo ku jiray xabsiga dhuusa-mareeb, wuxuu xusay inay ka tir tireen fikradii uu aamisanaa.
Mudane Ilkacase waxaa uu idaacada daljir u xaqiijiyey in cafiska qofkaas uu yimid kadib markii ay waalidiintiisu dalbadeen in loo cafiyo wiilkooda, iyo sabab? kale oo iyana ah inay fikradii qaldanayd ka saareen.
“Waxaa la gaariyey xiligii la xaqiijiyey in uu ka tanaasulay fikradii hore ee uu haystay, si dhab ah ayaa loo hubiyey markaas ayaan fasaxnay, sidoo kale dhanka waalidka waa jiraa codsi ka yimid.” ayuu yiri Sheikh ilkacase?
Maamulka Ehellusuna ee gobollada dhexe sidoo kale waxay ka hadleen howlaha amniga iyo qorshaha maamulka ee ku wajahan goboladaas, Al-shabaab iyo Ehellusuna ayaa dhowr jeer oo hore dirir ku dhexmartay gobolka.
Dhegeyso: – Ayaanle Cabdulaahi oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Axmed Ilkacase?